Noocyada kala duwan ee midabada leh isticmaalkooda iyo isku darka | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Tricks
In badan ama ka yar dhammaantiis waan ognahay dareenka ama dareenka midabku bixiyo. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cad waa casaanka meeraha Mars oo tilmaamaya dagaal ama kan jeeriga, oo aan u tarjumeyno midka labaad xamaasad. Ogaanshaha macnaha midab kastaa waa mid waxtar leh in lagu xoojiyo muuqaalka farriinta memega, ama xitaa in diiradda la saaro midabada midabka ee naqshadeynta websaydhka.
Laakiin maxaa dhacaya markaan rabno inaan isku darno? Waxaan dhihi karnaa dhibaatooyinka waxay u muuqdaan inay isku dayayaan inay ogaadaan in cagaarkaasi uu sifiican ula jaan qaadi karo liin jaalle ah oo jilciya xoojinta mid ama mida kale. Waa mid ka mid ah furayaasha qaabeynta in la ogaado sida loo doorto midabka saxda ah si is waafajinta muuqaalka ay ugu muuqato daawadaha ama isticmaalaha furaya codsigeena markii ugu horreysay.
Tan waxaan si toos ah ugu tagnaa waxa waxay qaadataa il tababaran si dhakhso leh loo garto midabkee u dhigma mid kale si loo siiyo macne gaar ah. Haddii aan dooneyno inaan ku indha-indheeyno daawadayaasha muuqaal qurux badan, qorrax-dhac jaceyl ah ama muuqaal firfircoon oo ay midabbada kala duwan awood u leeyihiin inay na siiyaan dareenka ah inuu sawirku soconayo xitaa markuu taagan yahay.
1.1 Midabka liinta
1.2 Midabka guduudka
1.3 Midab huruud ah
1.5 Midabka buluugga ah
1.6 Midab madow
1.7 Midab cagaaran
2 Isku-darka midabka isku-dhafan
2.1 Caadiga ah iyo gadaal
2.2 Buluug dhalaalaya iyo cagaar
2.3 Aaladaha iyo liinta qorrax dhaca
2.4 Degganaanta buluugga badda Mediterranean
2.5 Casriyeynta iyo xasilloonida
2.6 Buurta buluug
2.7 Guridda 50-meeyadii
2.8 Turquoise iyo casaan
2.10 Hufnaanta dabiiciga ah ee dhulalka
2.11 Baddii iyo cirka gacanka
Kahor intaadan u gudbin isku-darka midabbo aad u murugsan, aan ogaano midab midabba u gudub si aad ugala hadasho waxyaabaha u gaarka ah iyo midabadaas ay la jaanqaadayso. Waxaan had iyo jeer kugula talin doonnaa in tijaabintu ay tahay qaab kale oo lagu helo isku-darkaas, in kastoo sidaan soo sheegnayba, waa inaan indho adag leenahay ama aan leenahay hibadaas aan ku dhalan karno si aan u ogaanno isku-dhafyada si dabiici ah u yimaada.
Waxaan ka horreynaa midabkaas awoodda u leh ka xanaajin kara gardaro weyn markaan u aragno inuu yahay hal-abuurka naqshadda A Clockwork Orange ee Stanley Kubrik. Xitaa iyadoo sidaas ah, waxay muujineysaa macnaha isbeddelka, kan casriga ah iyo waxa taagan. Waxaan ku wajahnay mid ka mid ah midabadaas aad jeceshahay ama aadan jeclayn, laakiin kuwa asalka ah.
Qaadataa si fiican u leh palette liin gaar ah oo leh midab sida cagaar. Waxay la jirtaa dhulalka aan sidoo kale ka heli karno isaga, marka laga reebo kuwa casaanka ah. Haddii aynaan rabin inaynaan isku murgin, ag-dhigista agabyo kala duwan oo midabbada liinta ah ayaa noqon doonta booska ugu fiican.
Waxaan horey u ogaanay in sanadkaan soo socda, 2018, UV waa midabka ay doorteen PANTONE. Midab in waxaa loo aaneeyaa qarsoodi, aan la garanayn iyo sahaminta waxaas oo dhan in la helo. Daandaansi iyo fikir, waxaan la kulannaa mid kale oo ka mid ah midabadaas oo ay xirteen fanaaniinta sida Prince.
Haddii aan raadino isku-darka, waan awoodnaa isaga si aad u fiican ula hel dhulalka, liinta kala duwan iyo taxane midab casaan ah oo marwalba ka xoog yar kan hoose. Cagaar waxay noqon kartaa isbarbardhig wanaagsan, gaar ahaan markay ka buluugsan tahay huruudka.
Midab huruud ah
Mid ka mid ah midabada ugu xiisaha badan jaleecada hore, in kastoo had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa haddii ay ka casaan badan tahay buluug. U janjeedhada liinta marwalba waxay araga ka dhigtaa nasasho, laakiin buluug ah, qabowgu wuxuu bilaabmaa inuu siiyo noocyo kale oo dareeno ah oo aad ugu badan xanaaqa. Waa midab laftiisa adag.
Iyada oo leh buluug cirka ah ayaan u dhigi karnaa si aan u sameyno isbarbardhig wanaagsan iyo markay u dhowaato mid ka mid ah buluug ama casaan midab, waxay awood u leedahay inay la macaamisho qof walba Waxaan sidoo kale ku hareereysan karnaa codad madow si ay si weyn ugu soo baxaan muuqaal kasta.
El midabka xamaasadda, jacaylka iyo midka awood u leh inuu na dareemo waxyaabo badan. Waa mid ka mid ah midabada aasaasiga ah, markaa xasilloonidiisu wax badan ayey ku xiran tahay hadba sida aan u wajahno mid ama midka kale. Waxaan ku xoojin karnaa macnaheeda cawl, halka haddii aan cagaar raadino aan yareyn karno hamiga iyo tamarta ay awood u leedahay inay ku bixiso shey kasta oo aan ku adeegsanno.
Iyada oo cagaar ah waxay si fiican isugu dhafan tahay, laakiin waxay ku xirnaan doontaa dhawaaqa. A saytuunku waligiis wuxuu ahaan doonaa ciyaar wanaag. Waxaan kuu qaadi karnaa dhowr casaan oo cadcad si aad ugu dhameysato casaan.
Midabka buluugga ah
Boqorka midabada qabow iyo maxaa meel walba waa laga helaa siinta, bilowga, xasilloonida, xasilloonida iyo qabowga. Kaliya waa inaad hoos u eegtaa wadada si aad uga hesho midabkan tiro badan oo baabuur ah.
Waan isku kaarsan karnaa oo leh noocyo buluug ah, sida cagaarka oo kale iyo casaan. Haddii aynaan doonaynin inaynu khatar u galno nashqad gaar ah, waan hubin karnaa inaynaan khaldami doonin haddii aynaan wax badan isku mashquulin.
Mugdi, dhimashada iyo rajo xumada waxay la soo baxeen midab madow, inkasta oo sidoo kale la siin karo macno kale oo raaxo iyo xarrago leh. Kaliya waa inaad aragtaa inay tahay midabka dabo iyo dharka fiidkii ee galaska.
Waa midab in waxay si fiican isugu dhafan tahay dhammaantood, inkasta oo ay awood u leedahay oo keliya inay bixiso dareenkaas raaxada iyo xarrago leh.
ka tamarta dib loo cusboonaysiin karo, dabeecadda iyo meeraha runti waxay u labistaan ​​si ay u muujiyaan kuwa nool iyo kuwa caafimaadka qaba. Waxaa sidoo kale loo aaneeyaa sunta oo hadaad fiiriso alaabada nadiifinta, badankood waxay isticmaalaan cagaar si ay u bixiyaan dareenkaas.
Waan awoodnaa isku dar midabada dhulka sida noocyada cagaarka ah ee noo qaata dabeecaddaas oo u aaneeya xaalad caafimaad oo wanaagsan. Iyada oo bunni ah sidoo kale si fiican ayey u wada socotaa.
Isku-darka midabka isku-dhafan
Wax yaroo iskudhafyada noo adeega si aan u siino dareenno kala duwan iyo odoros muuqaallo loogu talagalay naqshadeynta websaydhka, codsiyada ama shaqo taas oo aan u baahan nahay inaan ka helno saddex ama afar midab oo u qalma inay ku qanciyaan aragtida daawadayaasha.
Caadiga ah iyo gadaal
Haddaan gudubno madow, a cagaaran saytuun qabow, carmine cas iyo bunni, waxaan ka heli doonnaa midab midab leh oo si fiican ugu shaqeeya sawirka gaariga gadaal.
Buluug dhalaalaya iyo cagaar
Midabo kala duwan oo ka mid ah buluug fudud iyo madow oo lagu daray jaalleWaxay awood u leeyihiin inay firfircoonaan badan siiyaan goob kasta ama waxa noqon karaya xayawaan muujinaya baalashiisa firfircoon.
Aaladaha iyo liinta qorrax dhaca
Haddaan u tagno guduud ilaa oranji iyo jaalle, dhammaantood waxay awood u leeyihiin inay na geeyaan qorrax-dhaca casaanka ah ee ka muuqda harada si loo siiyo muuqaal dhan oo ka buuxa nolol iyo midabbo.
Degganaanta buluugga badda Mediterranean
Iyadoo a midab guduudan oo aad u fudud iyo mid ka madow, oo lagu daro bunni, waxaan ka heli karnaa isku-dhafnaan nasasho ah oo aan u qaadno badda Mediterranean-ka oo aan ku siino xasillooni deggan.
Casriyeynta iyo xasilloonida
Laga bilaabo madow ilaa midab madow iyo cirro khafiifa, waan dooran karnaa guduud caajis ah oo lagu daray midab aad arkayso in wada jir loo isticmaali karo in lagu bixiyo xarrago iyo soo-bandhigid mashaariic kala duwan oo wanaagsan.
Kala duwan oo wanaagsan oo ka mid ah midabyo buluug ah oo leh cagaar aad u firfircoon waxay matali kartaa panorama sidoo kale bixisa deganaanta iyo dhinaca muxaafidka ah ee naqshadeynta.
Midab taxane ah oo midba midka kale ka kale si wanaagsan ayey u wadaagaan waa cagaar midab buluug leh leh, midab buluug ah oo ku dhow cagaar, iyo mid kale oo saytuun ah, in kasta oo uu aad u cad yahay, si loo helo muuqaal guridda ah.
Turquoise iyo casaan
Midab buluug ah oo lagu daray casaan ayaa noqonaya isku dhafan fiican. Ku dar madow, buluug buluug madow ah iyo cawl, natiijaduna waa ciyaar xirfadeed dhammaan noocyada yoolalka naqshadeynta.
Xulo seddex midab oo bixiya muuqaalka aan ku jirno xagaaga, buluug madow oo ku dhow madow iyo cagaar aan midabkiisa u nuujino. Isku dhafka midabada ayaa aad ugu awood badan nooc kasta oo xayeysiinta xagaaga ah.
Hufnaanta dabiiciga ah ee dhulalka
Midabada dhulka madow oo lagu daray mid taxane cawl iyo madowWaxay awoodaan inay noo daabulaan wada noolaansho si aan u siino kuwa casriga ah.
Baddii iyo cirka gacanka
Kala duwanaanshaha a isku midab ah oo sababa iftiin badan marka lagu daaweeyo wejigooda sida sawirka ka muuqda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Kala duwanaanta midabka: adeegsiga iyo isku darka
Aad u xiiso badan oo aad wax ku ool ah.
Boostada weyn :)
Jawaab Mara G Moreno
Ma aanan aqoonin balooggan
Waad ku mahadsantahay shaqadaada. Waxaan u hayaa barashada oo gacanta ayaan ugu hayaa inaan shaqeeyo
Isbedelada ugu muhiimsan ee naqshadeynta garaafka ee 2018
100 qalfoof weyn sida carwo ku taal matxafka